Mareykanka oo baaq ku aadan Muddo-kordhinta u diray BF | KEYDMEDIA ONLINE
Mareykanka oo baaq ku aadan Muddo-kordhinta u diray BF
Wasaaradda Arrimaha Dibadda ayaa dhanka kale soo dhawaysay diidmada Rooble iyo Maamullada Galmudug iyo HirShabelle ay diideen Muddo-korarsiga.
WASHINGTON - Dowladda Mareykanka ayaa ugu baaqday Gollaha Shacabka inuu baabi'yo gebi ahaanba qaraarka Muddo-kordhinta loogu sameeyay Farmaajo 12-kii bishan April, kaasoo hubanti la'aan geliyay mustaqablka Soomaaliya.
"Waxaan ka codsaneynaa madaxweynaha iyo baarlamaanka inay si deg deg ah uga howl-galaan baabi'inta hindise sharciyeedkii muddo kordhinta ee 12 April," ayaa lagu sheegay War-Saxaafadeedka Mareykanka.
Sidoo kale, Qoraal kasoo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda Mareykanka ayaa lagu sheegay in maamulka Joe Biden si dhaw ula socda balan-qaadkii Farmaajo uu sameeyay habeen hore, 28-kii April ee ahaa inuu dib ugu laabanayo Wadahadallada arrimaha doorashadda.
Waxay dowladda Mareykanka ugu baaqday hogaamiyeyaasha Soomaaliya inay si dhaqso ah ku qabsaan doorasho saldhig u ah heshiiskii 17-kii September, islamarkaana meel la iska dhigo danaha gaarka ah, lagana wada shaqeeyo sidii dalka looga samata-bixin lahaa marxaladdan uu ku jiro.
"Dhammaan Hoggaamiyeyaashu waa inay dhinac iska dhigaan himilooyinkooda siyaasadeed iyo kala aragti duwanaanshaha, islamarkaana ay u wadahadlaan si shuruud la'aan ah, tanaasulna sameeyaan," ayaa lagu yiri qoraalka.
Mareykanka ayaa ku baaqay in Ciidamada isku horfadhiya Muqdisho la kala qaado, oo loo ogolaado wadahadallada inay ku qabsoomaan qab nabad ah oo ka caagan rabshado iyo cagajugleyn.
Dhanka kale, Wasaaradda Arriamaha Dibadda Mareykanka ayaa bogaadisay go'aannadii Galmudug, HirShabeelle iyo Rooble ay ku diideen muddo-korarsiga Farmaajo.
Baaqa Mareykanka ayaa imaanaya xili Sabtida la filayo in Gollaha Shacabka uu Farmaajo hortago, iyadoo sida wararka ay sheegayaan ay dhici karto inuu Madaxweynaha waqtigiisu dhamaadey uu ku dhawaaqo tallaabo sharci darro ah, oo sii kala fogeyn karta dhinacyada isku haya siyaasadda dalka.